Shiinaha Warshad Cadaadis Xakamaynta Warshadda Soosaarka & Soosaarayaasha | Convista
Cabbirka Magaca GPR-A100 DN25 ～ 250 (NPS1 10) GPR-A200 DN25 ～ 300 (NPS1 12))
Cadaadiska Magaca GPR-A200 CLass150 ～ 900GPR-A100 CLass150 ～ 600
Heerka Naqshadeynta EN 334
Heerkulka Naqshadeynta -29 ～ + 60 ℃ ； -46 ℃ ～ + 60 ℃
Waxyaabaha jirka ： A105 、 A350 LF2 ； A216 WCB 、 A352 LCC
Cadaadiska Shaqada iyo Heerkulka
Xarunta gudbinta gaaska ee dhuumaha masaafada dheer; Saldhigga xakamaynta cadaadiska gaaska magaalada; Nidaamka xakamaynta cadaadiska gaaska warshadaha iwm.
Dhexdhexaad ku habboon gas Gaaska dabiiciga ah, gaaska aan wax baabi'in
Fasalka kahortaga qarxinta iyo ilaalinta ： ExdIIBT4 ， IP65
• Qaab dhismeedka axial, awoodda socodka sare
• Saamiga weyn ee la isku hagaajin karo, hagaajinta saxda ah, waara
• Naqshadeynta diaphragm rogista nooca 'GPR-A200', oo ku habboon is-kormeerka nidaaminta nidaam si buuxda u furan; Nooca GPR-A100 oo leh naqshad xagal R ah, oo loogu talagalay nidaamka is-kormeerka ee ku jira xaalad hagaajinta joogtada ah
• Bir aan xadi lahayn iyo gacmo hufan ayaa leh waxqabad ka roon oo wanaagsan iyo caabbinta daxalka.
• Qalabka yareynaya sawaxanka waxaa lagu qalabeyn karaa dhoofinta iyo soo dejinta labadaba
• Tilmaame tilmaame booska waalka
• Qalabka gudbiyaha dareeraha dareeraha booska waa lagu qalabeyn karaa
Hore: Jaangooyaha qulqulka axial
Xiga: Amniga Xiritaanka Amniga
5301 Canugga Hubinta Walwaalka